Desktọ egwuregwu egwuregwu n'ogbe na RGB Model LY Manufacturer and Supplier |Ụba abụọ
Ihe izizi:Mpempe akwụkwọ, igwe, plastik
Ihe kacha elu:Mpempe akwụkwọ
Mkpokọta nha:21.93 n'arọ
Onye nrụpụta:Oku abụọ
• Nnukwu egwu egwu: Tebụlụ egwuregwu Twoblow nwere nnukwu elu nke 120 * 60 * 75cm ma na-enye ọtụtụ ohere maka kọmputa, nyochaa, keyboard, òké, ọkà okwu wdg ma na-enye ndị egwuregwu mgbanwe dị mma iji ghọta nrọ egwuregwu ha.
• Ọrụ egwuregwu arụnyere n'ime: Ezubere tebụl kọmpụta Twoblow iji kwalite ahụmịhe egwuregwu gị.Ọ na-abịa na njide iko dabara adaba, nko ekweisi, nkata nchekwa na oghere njikwa eriri USB 2 iji mee ka tebụl egwuregwu gị dị mma.
• Nhazi ụdị T siri ike ma kwụsie ike: Ejiri fibreboard nwere njupụta dị elu nke nwere elu PVC yana igwe mkpuchi mkpuchi nwere ogologo ogologo oge.T-ụdị imewe na anọ larịị ụkwụ hụ na oche-anọgide kehoraizin.
• Multi-purpose design: Black mpụta na ọrụ bara uru zuru oke maka egwuregwu na ụlọ ọrụ!A pụkwara iji ya mee ihe dị ka tebụl PC, tebụl ụlọ ọrụ, tebụl ọmụmụ, ọdụ ụlọ ọrụ, tebụl kọmputa, wdg. Ihe nkwụnye ụkwụ na-agbanwe agbanwe nwere ike ichebe oche ahụ n'onwe ya ma gbochie mmebi ala mgbe ị na-akwagharị oche.
• afọ ojuju ndị ahịa: Anyị chọrọ ijide n'aka na anyị na-emepụta ma rụpụta tebụl egwuregwu kacha mma na ahịa.
Tebụlụ egwuregwu nwere ụdị T-abụọ
Ihe owuwu siri ike ma kwụsie ike
Okpokoro egwuregwu bọọlụ nwere ụdị T na ụkwụ anọ nwere ọkwa, nke na-edobe oche ahụ n'ala na-enweghị isi na-enweghị mgbagha.Igwe ígwè siri ike na ụkwụ ígwè hexagonal na-eme ka ịdịte aka na nkwụsi ike dị elu.
Nhazi nke oge a na ọtụtụ ọrụ
Emebere ya n'ụdị ọgbara ọhụrụ, nke emebere ya maka ndị egwuregwu, enwere ike iji ya dị ka tebụl kọmpụta, ebe a na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ, ụlọ ọmụmụ ihe, oche n'ụlọ na ọfịs ma na-enye ọmarịcha egwuregwu na ahụmịhe ọrụ.
Desktọpụ carbon fiber adịchaghị
Ejiri PVC carbon fiber surface rụọ desktọpụ ahụ na P2 laminate chipboard, nke na-egbochi mmiri ma na-eyi ya, na-eme ka ọ dịgidere karịa ogwe aka ochie.
Igwe igwe siri ike nke nwere ụdị T
Ejiri ígwè siri ike kpuchie ntụ ntụ na ụkwụ ígwè hexagonal nke nwere ike hụ na ịdịte aka na nkwụsi ike dị elu, na ibu kachasị elu ruru 440 pound.
Ogo zuru oke na-enye ohere dị ukwuu maka igwu egwu, ide ihe, mmụta na ihe omume ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ihe na-ejide ihe ọṅụṅụ: Ị nwere ike ịhazi ya n'aka ekpe ma ọ bụ aka nri ka ọ dị mkpa.
nko ekweisi: nko ekweisi n'akụkụ ọ bụla maka ahụmịhe egwuregwu ka mma.
Shei njikwa eriri USB: Ị nwere ike zoo eriri niile nke ọma ma dobe desktọpụ ahụ ọcha.
Mpempe ụkwụ na-emegharị emegharị: Mpempe ụkwụ na-agbanwe agbanwe na-echebe ala gị pụọ na ncha ma mee ka tebụl kọmpụta guzoro n'ala na-enweghị isi na-enweghị mkpọtụ.
Nchụso ebighi ebi anyị bụ àgwà nke "Gbanyere ahịa, na-echebara omenala, na-ahụ maka sayensị" yana tiori nke "àgwà ndị bụ isi, kwere na nke mbụ na njikwa ndị dị elu" maka OEM / ODM China Egonomic R Structure Gaming Desk PC Desk with metal Frame, Anyị na-adị njikere na-enye gị ezigbo azum n'ime aghụghọ nke iwu na a ọkachamara n'ụzọ kwesịrị gị mkpa.Ka ọ dị ugbu a, anyị na-anọgide na-enweta teknụzụ ọhụrụ na imepụta atụmatụ ọhụrụ iji wepụta gị n'ihu site na ahịrị obere azụmaahịa a.
Nke gara aga: Ọnụ ahịa ụlọ ọrụ ndị China Extreme Gaming Chair Factories - Onye isi oche Model P005 - TWOBLOW
Osote: Tebụlụ egwuregwu nwere ụkwụ ụdị Z Ụdị FM-Z
Desktọ egwuregwu ojii
Desktọpụ Ịgba Cha Cha
Tebụl Egwuregwu na oche
Tebụl Kọmputa egwuregwu
Desktọpụ ịgba chaa chaa nwere ọkụ Led
Tebụl egwuregwu PC
Ezigbo oche egwuregwu
L Desk egwuregwu
Ụlọ ịgba chaa chaa Led
Desktọpụ egwuregwu Pink
Rgb Gamer Desktọpụ
Tebụl Gamer Rgb
Ụlọ egwuregwu Rgb
Tebụl egwuregwu Rgb
Obere oche egwuregwu
Desktọpụ egwuregwu Vitesse
Tebụlụ egwuregwu nwere ụkwụ ụdị Z Ụdị FM-Z
Tebụlụ egwuregwu na RGB Model ZA-HC-Z
Desktọ egwuregwu ịgba chaa chaa dị elu nke nwere R Shape chọọ ụkwụ mma...